Arcadia Mount Kinabalu - I-Airbnb
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguJoe
I-Arcadia Chalets ibekwe ngaphakathi kwendawo yeGalufa yeQela kwithafa leNtaba iKinabalu kwi-1500 yeemitha ngaphezu komphakamo wolwandle. INtaba iKinabalu yenye yezona ntaba ziphakamileyo eMzantsi-mpuma Asia kwaye ikwayindawo yeLifa leMveli le-UNESCO. I-Arcadia yindawo yokuphumla kunye neentsapho kunye nabahlobo, ube neencoko ezimnandi ngexesha lesidlo sangokuhlwa okanye uzisonge nje ngencwadi. Abantu abafuna ukubaleka kubuphithiphithi bobomi bemihla ngemihla baya konwabela indawo enoxolo yeArcadia.
Qaphela: Ubushushu bunokwehla ngaphantsi kwe-17C.
IiChalets ziiyunithi enye ezakhiwe kusetyenziswa umthi oqinileyo wetropikhi kwaye amagumbi kunye nezibonelelo ziqhagamshelwe ngezinyuko zamaplanga kwindawo eyahlukileyo kancinane. IiChalets zibanzi kunye nophahla oluphezulu zinika i-rustic kunye nokuziva ekhaya malunga nale ndawo.
Umnini-ndawo uwagcine amathambeka asekuqaleni kunye nohlaza lwendalo lwalo mmandla. Kukho umjelo wendalo odlula emhlabeni.
4.96 · Izimvo eziyi-94
I-Arcadia ikufuphi neKinabalu National Park, indawo yelifa lehlabathi le-UNESCO. Iindwendwe zinokunyuka intaba okanye zihambe ecaleni kwendlela yepaki. Iindawo zegalufa nazo zivulelekile kubakhenkethi.
Ezinye iindawo ezikufutshane ezinomdla yiPoring Hot Springs, isikhumbuzo sokufa kwe-WWIl kaMatshi esinikezelwe kumajoni aManyano kunye neFama yoDai yaseDesa.
Olona shishino luphambili kulo mmandla kukulima imifuno epholileyo, iintyatyambo kunye nemifuno, kunye nokhenketho.
Kukho umgcini kwisiza onendawo yakhe yokuhlala yabucala kwaye onokukunceda kwaye ahoye imibuzo yakho. Umnini unendawo yakhe yokuhlala yabucala ngaphakathi kwikhompleksi kwaye akahlali kwisiza.
Iilwimi: English, Melayu
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ranau